9 B2B Event များကို Event Tech နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်နည်းလမ်း ၉ Martech Zone
Event B နှင့် B9B ဖြစ်စဉ်များကို Tech Tech နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2017 အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2017 Michael Doane
သင်၏ Martech အထဲ၌အသစ်: Event Management Software
ပွဲစီစဉ်သူများနှင့်စျေးကွက်သမားများအဖို့အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောစပီကာများရှာဖွေခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများကိုပြသခြင်း၊ ကမကထပြုရောင်းချခြင်းများရောင်းချခြင်းနှင့်ထူးကဲသောတက်ရောက်သူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုရရှိခြင်းသည်သူတို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အချိန်များစွာယူရသောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် B2B ပွဲစီစဉ်သူများသည် Event Tech ကို၎င်းတို့၏ Martech ထပ်တွင်ထည့်သွင်းလာကြသည်။ CadmiumCD တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၇ နှစ်ကျော်ကြာအဖြစ်အပျက်စီစဉ်သူများ၏ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်ဆော့ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Event Tech နဲ့စည်းရုံးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တချို့ကိုဖြိုဖျက်တော့မယ်။
၁။ ညီလာခံတင်သွင်းခြင်းကိုကောက်ယူ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
B2B အဖြစ်အပျက်စီစဉ်သူများရင်ဆိုင်ရသည့်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာအကြောင်းအရာကြီးများကိုကောက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ တက်ရောက်လာသူများကိုလှုပ်ရှားမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဟောပြောသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကလိုလားသည်။ ပြောသူတိုင်း၏တင်ဆက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်နှင့်ကိုက်ညီရန်အရေးကြီးသည်။
Event Tech ၀ င်ရောက်လာသည်။ တင်ပြလိုခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) များကိုထည့်ပေါင်းသည် စိတ္တဇသင်၏ Martech stack သည်သင်ရရှိသည့်တင်ပြမှုအားလုံးကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
တင်သွင်းမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုအကြံပြုနိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူကော်မတီကိုလည်းသင်စုစည်းနိုင်သည်။ ဒီမှာဆောင်းပါးပါ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကသူမရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကို ၁၀၀% အထိဘယ်လိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သလဲ။
သူတို့အား Pesky စပီကာကိုစီမံခန့်ခွဲ
သင်၏အဖြစ်အပျက်၏အကြောင်းအရာကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးလျှင်နောက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် စပီကာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ စပီကာများသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားရန်ခက်ခဲသည်။ တင်ပြချက်များကိုအီးမေးလ်နှင့်စာရင်းဇယားများမှတဆင့်ခြေရာခံရန်မှာထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မသင့်တော်ပါ။
အဆိုပါအရာသည်စပီကာအလုပ်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ပေးထားတဲ့နယ်ပယ်မှာကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်ပြီး၊ သင့်ဖြစ်ရပ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေများများစားစားရှိတယ်။ များသောအားဖြင့်သူတို့သည်သင်၏အခမ်းအနားတွင်ပြောဆိုရန်အခကြေးငွေမရကြပါ။
ကဲ့သို့သော Tech မှဖြစ်ရပ် ညီလာခံရိတ်သိမ်း ရလာဒ်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်သင်၏စပီကာများနှင့်ထိထိရောက်ရောက်လိုက်နာရန်ကူညီနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည် (သို့မဟုတ်သူတို့၏လက်ထောက်များ) သည်အပိုင်းအစကိုဖြည့်စွက်နိုင်သည့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလုပ်စာရင်းတစ်ခုရထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Spreadsheets လည်းအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ် သင်၏အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ပါဒါပေမယ့်နောက်တဖန်မစံပြ။ Event Tech ကသင့်အားပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်အတွင်းသင်ရွေးချယ်ထားသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သတ်၍ အချိန်ဇယားဆွဲရန်နှင့်စီစဉ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်ဟောပြောခန်းများကိုဟောပြောသူများကိုခန့်ထားနိုင်ပြီးအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစီမံနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာဤဖြစ်ရပ်သည်သင်၏ဖြစ်ရပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဖြစ်ရပ်အက်ပ်တွင်အသစ်ပြောင်းခြင်း ဖြစ်၍ သင်၏တက်ရောက်သူများသည်နောက်ဆုံးပေါ်အကြောင်းအရာနှင့်အချိန်ဇယားကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
၄။ Booth Space & Sponsorships ကိုရောင်းချပါ
B2B အဖြစ်အပျက်အများစုအတွက်ဝင်ငွေသည်အောင်မြင်မှု၏အရေးကြီးဆုံးအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်စပွန်ဆာအခွင့်အလမ်းများရောင်းချခြင်းပါဝငျသညျ။ ၄ င်းသည်သင်၏အဖြစ်အပျက်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ စပွန်ဆာပေးသောကဏ္ session သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောနဖူးစည်းစာတမ်းကြော်ငြာများဖြစ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့လွန်းဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ဂရပ်ဖစ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေမ - အစည်းအဝေးစီစဉ်သူများသည်၎င်းတို့ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ ၀ င်ငွေကိုတိုးမြှင့်လိုကြသည်။
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုကဒီသင်နှင့်သင်၏အရောင်းအဖွဲ့အပေါ်ထပ်တိုးဖိအားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ် Tech မှကြောင့်ဖိအားလျှော့ချပေးသည်။ ဥပမာ Corporate Relations ၏အကြီးတန်းမန်နေဂျာဂျက်ကီစတက်ရှ်သည် Expo Harvester ကိုအသုံးပြုသည် ကုန်စည်ပြပွဲအရောင်းအောင်မြင်မှုရရှိရန်.
ပြခန်းများနှင့်စပွန်ဆာပစ္စည်းများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သူတို့ထံမှလိုအပ်သည့်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်တင်သွင်းနိုင်သောကြောင့်ပြပွဲတက်ရောက်သူများက၎င်းကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။ စီစဉ်သူများအတွက်ဤသည်မှာရလဒ်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်သူတို့ရောင်းချခဲ့သည့်အခွင့်အလမ်းများကို tab များသိမ်းထားရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
၅။ ပွဲမတိုင်မီ၊ စဉ်အတွင်းနှင့်ပြီးနောက်ဆက်သွယ်မှုများကိုစီမံပါ
ဟောပြောသူများနှင့်ပြသထားသောသူများနှင့်မည်သည့်အလုပ်များလုပ်ရမည်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်တက်ရောက်သူများထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရှိရန်အရေးကြီးသည်။ Event Tech တွင်အီးမေးလ်နှင့် In-app push notifications များပါ ၀ င်သည့်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများပါရှိသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်များကိုအခြေခံပြီးစာရင်းများကိုသင်ခွဲနိုင်သည်။ ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားသည့်အီးမေးလ်တင်းပလိတ်များနှင့်စာပို့နိုင်သည်။
တူရိယာတွေလည်းရှိတယ် Boost ၀ န်ထမ်းများ၊ အခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်သူများ၊ အစီအစဉ်များကိုနောက်ဆုံးမိနစ်တွင်တင်ပြရန်နှင့်အစီအစဉ်အချိန်ဇယားပြောင်းလဲသွားပါကတက်ရောက်သူများအားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ရန်စပီကာများအားတိုးတက်ကောင်းမွန်သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
၆။ တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်တက်ရောက်သူများနှင့်ပါ ၀ င်ပါ
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်ဒီနေ့ဖြစ်ရပ်စီစဉ်သူများအတွက်ကြီးမားသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာစျေးကွက်သမားတွေလိုချင်တာပဲ။ ခြေရာခံလုပ်ရပ်များကိုမောင်းနှင်ခြင်းကသင်၏ပရိုဂရမ်များအလုပ်လုပ်နေကြောင်းပြသသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည် ROI ကိုပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပမှသက်ဆိုင်သူများကိုပြသသည်။
ဤတွင်သင်၏ Tech မှသင်၏ Martech stack သို့ Event Tech ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းများကိုအနည်းငယ်မျှသာဖော်ပြထားသည်။
မှတဆင့်ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲတဲအသွားအလာမောင်း တစ် ဦး scavenger အမဲလိုက်ခြင်း.
နှင့်အတူ app ကိုကလေးမွေးစားခြင်းတိုးမြှင့် Multi- ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ရပ် Tech မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးချဉ်းကပ်မှု.
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်အကြောင်းအရာ၏တန်ဖိုးကိုသိသည်။ B2B အဖြစ်အပျက်များကိုသူတို့၏နည်းဗျူဟာများအနေဖြင့်အသုံးပြုသောစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်အကြောင်းအရာများသည်ဖြစ်ရပ်များတွင်အချိန်နှင့်အမျှများပြားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ တက်ရောက်သူများနှင့်တက်ရောက်သူများမပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများအားထိုအကြောင်းအရာကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်နည်းလမ်းရှိခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Event Tech ကဲ့သို့ Event Tech ထည့်သွင်းခြင်းအားသင်၏အဖြစ်အပျက်သို့ထည့်ပါ၊ ထို့နောက်မျှဝေပါ ထပ်တူဖြစ်သောအသံနှင့်ဆလိုက်များပါသည့်ဗွီဒီယိုများ သင်၏ဒေတာဘေ့စ်သည်၎င်းကိုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ eventScribe ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများကဲ့သို့ဖြန့်ဖြူးသောလမ်းကြောင်းရှိခြင်းသည်လည်းအရေးကြီးသည်။
တက်ရောက်သူအတော်များများကဒီအက်ပလီကေးရှင်းကိုကူးယူပြီးပြီ။ ဒါကြောင့်သင်လုပ်ပေးရမည့်အချက်များအားလုံးသည် push message အကြောင်းကြားစာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်နှင့် voila များကိုပို့ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏စာရင်းသွင်းသူများသည်သင်၏ကွန်ဖရင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီသည်။ သင်၏ကွန်ဖရင့်ဆွေးနွေးပွဲများကိုခေါ်ယူခြင်းနှင့်၎င်းသည်သောင်းနှင့်ချီသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကဲ့သို့ပြန်လည်နေရာချခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်!
အကောင်းဆုံး B2B ဖြစ်ရပ်များသည်အချက်အလက်မောင်းနှင်သောဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။ Event Tech တွင်သင်၏ Martech stack ထဲသို့ထည့်ခြင်းကသင်၏သတင်းပို့ခြင်းတွင်အသစ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများကူးယူခြင်း၊ အကြောင်းအရာတင်ခြင်းများ၊ လူ ဦး ရေစာရင်းနှင့်အခြားအရာများကိုခြေရာခံကိရိယာများမှတဆင့်လွယ်ကူသည် mycadmium, ဥပမာ။
တက်ရောက်သူများထံမှအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့်လွယ်ကူစေသည် စစ်တမ်း Magnet။ ပွဲစီစဉ်သူများနှင့်စျေးကွက်သမားများသည်ဤအချက်အလက်များကိုထုတ်ကုန်အသစ်များဖန်တီးရန်၊ တက်ရောက်သူများ၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဤအချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။
Awards ပရိုဂရမ်များသည် B2B ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဖော်ထုတ်နှင့်အသိအမှတ်ပြု စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များဥပမာအားဖြင့်၊ အတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးသင်၏ B2B အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သတ်၍ တရားဝင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုအပေါငျးတို့သတင်ပြချက်မှတဆင့် sort နှင့်မှန်ကန်သောတစ် ဦး ချင်းစီရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Event Tech သည်ဆုပေးပွဲရမှတ်အမှတ်အသားကဲ့သို့သင်၏ Martech stack အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဒါဟာစီမံကိန်းနှင့်စျေးကွက်မှခွင့်ပြုပါတယ် တင်ပြမှုကိုစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်စုပေါင်းအကြံပြုချက်များအပေါ် မူတည်၍ လက်ခံသူများကိုရွေးချယ်ရန်၊
အဖြစ်အပျက်စီစဉ်သူသို့မဟုတ်စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနှင့်သင်၌စိုးရိမ်ရန်လုံလောက်ပြီဖြစ်သည်။ Event Tech တွင်သင်၏ Martech stack ထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးအားအကြောင်းအရာများကိုစုဆောင်းရန်၊ စီမံရန်နှင့်မျှဝေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Event Tech သည်သင်၏ B2B အဖြစ်အပျက်များကိုအတူတကွစုစည်းပေးသည်၊ သင်၏အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုလွယ်ကူစေပြီးသင့်အဖွဲ့အစည်း၏အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေသည်။
Tags: ပရိသတ်တုံ့ပြန်မှုစနစ်ဆုစီမံခန့်ခွဲမှုဆုတဲအရောင်းcadmiumcdညီလာခံဆုညီလာခံတုံ့ပြန်ချက်ညီလာခံရိတ်သိမ်းညီလာခံပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းညီလာခံတင်ပြဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်အဖြစ်အပျက်ဆုများအဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှု software ကိုeventcribe မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ရပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲအစီအစဉ်အစည်းအဝေးများscavenger အမဲလိုက်ခြင်းsession စီမံကိန်းsession အစီအစဉ်စပီကာစီမံခန့်ခွဲမှုစပီကာကဒ်စစ်တမ်းသံလိုက်ဆလိုက် syncrhonize
Michael Doane သည်အဖြစ်အပျက်များကိုနှစ်သက်သောစာရေးဆရာ၊ စျေးကွက်နှင့်ဝဘ်တီထွင်သူဖြစ်သည်။ At CadmiumCD သူသည် Event Tech ၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းအဖြစ်အပျက်စီစဉ်သူများကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူ၏မိတ္တူကိုအခမဲ့ရယူပါ Event Tech မှတိုးတက်မှုများ, Event Tech မှသင်၏ B2B Events ကိုမည်သို့လွယ်ကူစွာပြုပြင်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူရန်အခက်အခဲ (၅) ခု
ပရိုဂရမ်မာကြော်ငြာများသည် ၀ ယ်ခြင်းကြောင့်သင်၏နာမည်ကိုသေစေသလား။